Free Thinker: ဆိုးလွန်းလှသော ဘ၀များ
မနေ့ည (ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၇) ၇ နာရီခန့်က Interlace condominium၊ ၁၉ ထပ်မှ အိမ်အကူ မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက် ခုန်ချကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့သည်။ သူခုန်မချမီ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ခုန်မချဘို့ တားသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ အလွန်စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်၏။
မိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဘို့ဆိုတာ သိပ်လွယ်လှသည့်အလုပ် မဟုတ်ပါ။ ဒုက္ခသုက္ခများကို ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင် တော့သည့်အဆုံး၊ ရွေးစရာ တခြားလမ်းကလည်းမရှိ ဆိုတော့ သည်လမ်းကို ရွေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူဘာတွေ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသည်ဆိုတာကတော့ သူမှ ဂဃနဏပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူ့အိမ်ရှင်များပြောတာကို မည်မျှလောက် ယုံစားလို့ရပါမည်နည်း။
သည်ကဲ့သို့သော အမှုမျိုးများ စင်ကာပူတွင် ကြိုကြားကြိုကြား တွေ့ရတတ်သည်။
1. အိမ်အကူလာလုပ်သည့်မိန်းကလေးများမှာ (များသောအားဖြင့်) နယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာနှင့်စကားကို ကောင်းစွာမရေးတတ်၊ မဖတ်တတ်၊ မပြောတတ်၊ ပြောစကားကို နားမလည်ကြပါ။ အချို့ဆို မြန်မာစကားကိုပင် ရေလည်အောင် မပြောတတ်ကြပါ။
2. နယ်မှဖြစ်၍ မြို့ပြအသုံးအဆောင်၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့် မကျွမ်းဝင်၊ အသုံးမပြုတတ်ကြပါ။
3. မြို့နေလူတန်းစားတို့၏ နေပုံထိုင်ပုံ၊ အပြုအမူ စသည်တို့နှင့် မရင်းနှီးပါ။
4. နောက်ပြဿနာတစ်ခုက စင်ကာပူတွင် အိမ်အကူလုပ်သူများမှာ အသက်ကြီးသော လူကြီးမိဘများနှင့် တစ်နေကုန် နေရတတ်ပါသည်။ ထို အဖိုးကြီးအဖွားကြီးများမှာ အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်သူ အများပင် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်သည့်တိုင် သူတို့ဘာသာစကားမပြောတတ်သည့်အခါ ပြဿနာ တက်တတ်ပါသည်။
5. နောက်တစ်ခုက အသက်လိမ်လာတာ ဖြစ်၏။ စင်ကာပူတွင် အိမ်အကူလုပ်ရန် ယခင်က အသက်ကို (၂၁) နှစ် ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ယခု (၂၃) နှစ်ဟု ပြင်လိုက်ပါသည်။ အသက်ကို (၂၃) နှစ်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်းမှာ ထိုအသက်အရွယ်၌ အကျိုးအကြောင်း၊ အဆိုးအကောင်းကို ဆင်ခြင်နိုင်သည်။ လူ့ဘ၀အကြောင်း တော်တော် တီးမိခေါက်မိရှိနေပြီ။ ထို့ပြင် ဘ၀၏ အထုအထောင်းဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောအရွယ်ဟု ဆိုလို့ရပါသည်။ သို့သော် စင်ကာပူသို့ အိမ်အကူအဖြစ်လာလုပ်သော မြန်မာမိန်းကလေးများမှာ အသက်ကိုလိမ်လာသည်။ တချို့ဆို ၁၈ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးသည်။ ဒါ့ထက်တောင် ငယ်ချင်ငယ်ပါလိမ့်ဦးမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးကား အင်မတန် ထူးခြားဆန်းပြားလှသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ မရှိတာ မြန်မာပြည်မှာ အကုန်တွေ့ရမည်။
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အခြားနိုင်ငံများသို့ အိမ်အကူအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ အိမ်အကူအဖြစ် ပြည်ပသို့ထွက်မည်ဆိုလျှင် မည်သူ့ကိုမှ ထွက်ခွင့်မပြု။ ဒါက စာရွက်ပေါ်မှာ ဖြစ်၏။
သို့သော် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးမှနေ၍ တစ်နေ့တစ်နေ့ ရာနှင့်ချီသောမိန်းကလေးများ အိမ်အကူလုပ်ရန် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာနေကြသည်။ ခုနင်က အမိန့်ထုတ်ထားသော အနှီအရာရှိကြီးများ မသိတော့ပြီလော။ သိသမှ သိသိ သိသိ နှင့် နေသေးသည်။ ၎င်းတို့သိကြောင်း အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်က အပ်ချမတ်ချ စွပ်စွဲရပါသနည်း။
၎င်းတို့ဂိတ်ပေါက်မှ မထွက်လို့ ထို ဆယ်ဂဏန်းတော်တော်များများ မိန်းခလေးများမှာ အဘယ်နေရာကနေ ကျော်ခွ ထွက်လို့ ရပါမည်နည်း။ သို့ဆိုလျှင် မထွက်ရဟုအမိန့်ထုတ်ထားပါလျှက် အဘယ်ကြောင့် ထွက်ခွင့်ရနေပါသနည်း။ ကျွန်တော်မသိပါ။ (မသိပါဟုဆိုပြစေ။ ၆၆ဃ ဆိုတာကြီးကို ကြောက်လွန်လွန်းလို့။ ဘုရားစူးရပါစေရဲ့။ ကျုပ်တို့ရွာက လျှာ (၇) တောင်ထွက်တဲ့ သူရဲကြီးတောင် အဲသဟာကြီးလောက်မကြောက်ဘူး။)
အခြားနိုင်ငံများသို့ အိမ်အကူသွားလုပ်တာ ဘာမှ ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ သူများတကာတွေလည်း သွားလုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ဆိုလျှင် ထို အိမ်အကူမိန်းခလေးများထံမှ တစ်နှစ်တစ်နှစ် နိုင်ငံခြားငွေ မည်မျှဝင်သည်ဆိုတာကိုပင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် ကြေငြာနိုင်ပါသနည်း။
သူတို့က နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ အိမ်အကူအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်တာကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများကို မသွားမီကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲနည်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အိမ်အကူတစ်ယောက် တတ်သင့်တတ်ထိုက်၊ သိသင့်သိထိုက်သည်များကို သင်ကြား ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ စင်ကာပူရောက်လာသည့်အခါ သိပ်ပြဿနာမရှိတော့။ ထို့ပြင် သူတို့က တရားဝင်လာသည့်အတွက် သူတို့အစိုးရကလည်း တရားဝင်အကာအကွယ်ပေးလို့ရသည်။ သံရုံးသို့ သတင်းပို့ထားနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးမည့်သူ နောက်ဘက်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိသည်။ စင်ကာပူမှာ ဖိလစ်ပိုင်အိမ်အကူဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ အတိအကျပြောနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သူတို့တောင်လုပ်နိုင်သေးရင် ကျွန်ုပ်တို့ရော အဘယ်ကြောင့် မလုပ်နိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်တော် သည်ကိစ္စ မြန်မာအရာရှိကြီး တစ်ယောက်နှင့် ဆွေးနွေးဖူးပါသည်။
“အခုလို အိမ်အကူလုပ်ဘို့ ထွက်ခွင့်မပေးလဲ ထွက်နေကြတာပဲ။ ဒါဖြင့် အဲသလို တားနေမဲ့အစား အိမ်အကူအေးဂျင့်တွေကို လိုင်စင်ချပေး။ သူတို့လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းတွေထုတ်။ အိမ်အကူသွားမဲ့သူတွေကို ၆ လတန်သည်၊ တစ်နှစ်တန်သည် အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေး၊ မြို့ပြအသုံးအဆောင်သုံးစွဲနည်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းတွေ သင်ပေးပြီး တရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလိုက်လို့ မဖြစ်ဘူးလားဗျာ။”
သို့သော် သူကလည်း ပြောပိုင်ခွင့် အကန့်အသတ်နှင့်ဆိုတော့ ကျွန်တော်မေးသည့်ကိစ္စကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေမပေး နိုင်ပါ။ အင်း၊ အဲနှင့်သာ ပြီးသွားပါသည်။ အနို့ မင်းခယောက်ျား၊ ကမ်းနားသစ်ပင် ဆို မဟုတ်လား။
စင်ကာပူတိုးတက်ရသည့်အကြောင်းများထဲတွင် တစ်ခုမှာ “ကျုပ်တို့က လူအသွားများတဲ့နေရာကို လမ်းဖောက်ပေးတာပဲဗျ။ လူတွေဖြတ်သွားနေကြတဲ့ ခြေလမ်းတွေကို ကွန်ကရိခင်းပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါ ကျုပ်တို့ပေါ်လစီဘဲ။” ဟု ဘဘလီက သူ့ တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ စာအုပ်တွင် ပြောခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုထိတိုင် အတုမယူနိုင်သေး။ သေးမပေါက်ရ ဟု ဆိုင်းဘုတ်ကပ်ဘို့လောက်သာ သိသည်။ သေးပေါက်မည့်နေရာ ဖန်တီးမပေး။ (သေးပေါက်စရာနေရာ လုပ်ပေးမထားဘဲ သေးမပေါက်ရဆိုတော့ ကျုပ်တို့က သားရေကွင်းနဲ့ စုစည်းထားရမလားဗျာ။)
ယခုလို အိမ်ပေါ်မှ ခုန်ချသေသည့်သတင်းမျိုး ကျွန်ုပ်တို့အစိုးရ မကြားဘဲမနေ။ ကြားကိုကြားရမည်သာ ဖြစ်၏။ သည်လို ကိစ္စမျိုးဟူသည် ၀မ်းနည်းကြောင်း သ၀ဏ်လွှာလေး ၀တ်ကျေတန်းကျေထုတ်ပေးလိုက်ရုံနှင့် ပြီးသွားမည့်ကိစ္စမဟုတ်။ ဒီတစ်ယောက်ခုန်ချပြီး ဘယ်အချိန်နောက်တစ်ယောက် ထပ်ခုန်ချမည်မှန်း မည်သူမှ မသိနိုင်။
တစ်ယောက်ဆိုလည်း တစ်ယောက် တန်ဘိုးရှိသည်သာ ဖြစ်၏။ သူ့ဘာသာ မိတ်မကလို့ ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေ။ အနည်းဆုံး တော့ သူ့မိသားစုအတွက် အလွန်အဖိုးတန်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်။ သူသာ ငါ့သမီး၊ ငါ့တူမ၊ ငါ့နှမကလေးဆို ဘယ်လိုနေမတုံးဟု နည်းနည်းလောက် ခံစားကြည့်စမ်းပါ။
သည်တော့ သည်ကိစ္စကို သူ့ဘာသာ သတ်သေတဲ့ကိစ္စ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့တုံးကွာ ဟု မသိနိုးနား မနေကြပါနှင့်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက် -
နောင်သည်လို စိတ်မကောင်းစရာ ကိစ္စမျိုးများ မဖြစ်ရလေအောင် အရေးတယူ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါမည့်အကြောင်း တာဝန်ရှိသူ လူကြီးမင်းများအား အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါကြောင်း -
(လူကြီးများနှင့် ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ရှိသူများ ကျွန်ုပ်စာကို ပရင့်ထုတ်ပြီး သွားပေးလိုက်ကြပါကုန်။)
၁၃ ဇွန်၊ ၂၀၁၇။ ၁၂း၀၀ နာရီ
Posted by အေးငြိမ်း at 3:43 PM